वर्ष २०७५: नेपाली खेलकूद क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार, पूर्वाधार निर्माणमा निराशा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वर्ष २०७५: नेपाली खेलकूद क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार, पूर्वाधार निर्माणमा निराशा
गएको वर्ष फुटबलमा केही सकारात्मक कामको थालनी समेत भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले आर्थिक नियमावली र कार्यविधि लागू गरेको छ । कार्यविधि लागू भएसँगै एन्फामाथि लाग्दै आएको आर्थिक अनियमितता र विसङ्गति कम हुने बताउँछन्, एन्फा प्रवक्ता किरण राई ।
त्यसैगरी विसं २०७५ मा व्यक्तिगततर्फ दुई नेपाली फुटबलरले यस वर्ष दुईवटा अवार्ड समेत जित्न सफल भए । रोहित चन्द नेपालमा भन्दा इण्डोनेसियामा बढी चर्चामा छ । इण्डोनेसियाको लिग खेल्ने रोहितले यो वर्ष अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हात पारे । उनी खेलेको क्लबले लिगको उपाधि मात्र जितेन रोहित उत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल भए ।
यसैगरी सावित्रा भण्डारी, अनिता बस्नेतले भारतीय लिग तथा गिता राना भुटानी लिगमा जाने पक्का भएको छ । यसले महिला फुटबलको व्यवसायिक विकास महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने बताउँछन्, राष्ट्रिय महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्का ।
राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ९आइसिसी०को प्रतिबन्धमा परेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को फुकुवा हुन सकेन । तर नेपालका क्रिकेट खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा उल्लेख्य सफलता हात पारे । युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेको आइपिएलदेखि विगबाससम्मको यात्रा रोमाञ्चक बन्यो । व्यक्तिगत रुपमा सन्दीप करोडपति खेलाडी बने ।
विस २०१३ मा निर्माण गरिएको दशरथ रङ्गशाला शरदचन्द्र शाह सदस्य–सचिव रहेका बेला २०३४ देखि तीन वर्ष लगाएर यसकोे स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइएको थियो । रङ्गशालाको अहिलेको स्वरुप भने नेपालले आठौं दक्षिण एशियाली खेलकूदको आयोजना गर्दा चीन सरकारको सहयोगमा सन् १९९९ मा निर्माण गरिएको थियो । रासस